Chii Chashandurwa Nezve Corporate Blogging Pamakore? | Martech Zone
Chii Chashandurwa Nezve Corporate Blogging Pamakore?
China, January 18, 2018 China, January 18, 2018 Douglas Karr
Kana wanga uchinditevera makore gumi apfuura, unoziva kuti ini ndakanyora Corporate Kubhuroka kweDummies kumashure mu2010.Nepo nzvimbo yemadhijitari enhau yakave neshanduko huru pamusoro pemakore manomwe apfuura, ndiri pachokwadi handina chokwadi kuti pakave neshanduko dzakawandisa kana zvasvika kubhuku nemakambani ari kugadzira chirongwa chekublogi chekambani. Mabhizimusi nevatengi vachiri kunzwa nzara yeruzivo rwakakura, uye kambani yako inogona kuve iro ravari kutsvaga.
Saka Chii Chashanduka neCorporate Blogging?
makwikwi - iine angangoita ese makambani anotangisa blog yemubatanidzwa, mikana yekuita kuti izwi rako rinzwike mumhomho ishoma… kunze kwekunge uri kutumira chimwe chinhu chinoshamisa. Zvinyorwa zveBlog makore manomwe apfuura aive mazana mashoma mazwi uye pamwe aive nemufananidzo mudiki kwazvo. Mazuva ano, vhidhiyo nemifananidzo zvinodzora zvakanyorwa. Zvemukati zvinofanirwa kunge zvakanyatsotsvagisirwa uye zvakanyorwa zvirinani kupfuura chero mukwikwidzi kana iwe uchitarisira kuti iwane kukodzera traffic uye shanduko.
maitikiro - vatengi uye mabhizinesi zvakafanana vari kugadzirisa kunze, pane zvakanyanyisa kukuvadza zvakawanda zvemukati zviri kugadzirwa uye hazvisi kuzopedzwa. Isu taimbo tarisa kublogging frequency semutambo wemukana - yega yega positi yakawedzera mukana wekuti zvemukati zviwanikwe, zvionekwe, zviwanikwe, uye zviitwe. Mazuva ano, isu tinosimudzira zvemaraibhurari. Izvo hazvisisina nezve kudzokorora uye kuwanda, ndezvekuvaka chinyorwa chiri nani kwazvo kupfuura icho mukwikwidzi wako akaita.
Media - pamwe neshoko rekuverenga, kutaridzika kwemukati kwachinja zvakanyanya. Unlimited bandwidth uye yekushambadzira sarudzo dziri kuisa podcast uye mavhidhiyo pamaoko ean chero munhu ane smartphone. Isu tinoedza kuburitsa yakasarudzika zvemukati kuburikidza neyese svikiro kusvika kune chaicho zviwanikwa.
famba - kunyangwe nevatengesi vedu veB2B, tiri kuona kuwanda kwevaverengi venhare munzvimbo dzese dzevatengi vedu. Kuve nekukurumidza, kunoteerera, uye kubata pamberi pechisimba hakusi uye sarudzo.
Webhusaiti Inovaka yakagadzira iyi inoshamisa infographic, Iyo Mamiriro eBlogging Indasitiri & Yekupedzisira Yekutangisa Nhungamiro pane Maitiro Ekugadzira Blog iyo inotifambisa kuburikidza nemakambani ekublogi mapuratifomu, kuverenga kwevanhu, maitiro ekuverenga, matipi ekunyora, kugovana munharaunda, uye kutyaira kutendeuka mune ino infographic.
Tags: 2017Bloggingkubatanidzwa bloggingmagariro enhau kugovanamamiriro ekublogiwebsitebuilder
Douglas Karr Thursday, January 18, 2018 Thursday, January 18, 2018
Pane Pane Chero Yakanaka Nguva Yekutangisa Itsva Yemagariro Network?
Maitiro Ekutengesa uye Ekushambadzira Alignment Anotyaira Zvirinani B2B Mhedzisiro paLinkedIn